PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Inselelo yowe-ANC kuhulumeni
Inselelo yowe-ANC kuhulumeni
Isolezwe - 2018-05-18 - IZINDABA - MLUNGISI GUMEDE
ILUNGU lesigungu esiphezulu kwi-ANC uMnuz Jackson Mthembu likhwele ladilika kuhulumeni lathi akukwazi ukuthi kubulawe abantu okwezinambuzane KwaZulu-Natal kodwa kungaboshwa muntu.
Ekhuluma eCity Hall eMgungundlovu izolo enkonzweni yesikhumbuzo sesishoshovu esibulewe se-ANC eMoses Mabhida, uMnuz Msawenkosi “Maqatha aziqobayo” Mchunu, uMthembu uthe kuyabakhathaza ukuthi eMoses Mabhida sekubulewe amaqabane angu-14 kodwa akuboshwe muntu.
“Akukwazi ukuthi kubulawe amaPhini eziMeya namakhansela kucwebe iziziza,” kusho uMthembu.
Uthe uhulumeni kumele ukhuphule amasokisi ubambe ababulali.
“Ngeke kuphele ukubulawa kwabantu uma ababulali bengabanjwa, esikufunayo ukuthi kubanjwe nalabo abasuke bethume izinkabi bagwetshwe khona nabanye bezothola isifundo,” kusho uMthembu.
Uchaze abantu ababulele uMaqatha njengamavaka.
“UMaqatha ubengesilo igwala ekhuluma noma yini esengqondweni yakhe yingakho amagwala ebona ukuthi kufanele ambulale,” kusho uMthembu.
Uthe labo ababulale uMaqatha uma bengamalungu enhlangano kumele baboshwe baphucwe nobulungu.
Uthembise umndeni kamufi ukuthi benguhulumeni bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi babanjwe ababulali. “UMengameli uMnuz Cyril Ramaphosa uzifikele mathupha emndenini kaMaqatha lapho ememezele khona ithimba alihlaganisile loNgqongqoshe abane owamaPhoyisa, owezobuNhloli, amasosha nezoBulungiswa athe ufuna limnike umbiko ngokuthi kuqhubekani ngamacala abantu asebebulewe okungaboshwe muntu kuwona.”
Uthe akukwazi ukuthi benguhulumeni wakuleli bangakhala ngesihluku esenziwa ngamasosha ase-Israel lapho ebulala khona abantu basePalestina kodwa bebe behluleka ukubopha abantu ababulala abantu mihla namalanga ezweni labo. Uthe ngeke kube kuhle ukuthi kuhlale ingqungquthela yesifunda saseMoses Mabhida uma kusabulawa abantu.
USihlalo weMKMVA KwaZulu-Natal uMnuz Themba Mavundla uthe sebezongenelela bengamasosha ekubulaweni kwamaqabane ngoba bayabona ukuthi amaphoyisa ayahluleka ukwenza umsebenzi wawo. “Sikhathele ilento ehlale ishiwo kuthiwa akuyekelwe amaphoyisa enze umsebenzi wawo ngoba sonke sesibonile ukuthi ayahluleka ukubamba ababulali.”
Uthe umphakathi kumele utshele yena ukuthi ngobani ababulala abantu yena bese ebadlulisela emaphoyiseni.
Uthe bakhathele ukuthi kube khona abantu abathuma izinkabi ukuthi zibulale amaqabane kugcine kungaboshwanga muntu.
“Kumele labo ababulala abantu lapha eMabhida bazi ukuthi badle iqatha elikhulu uMaqatha elizobabinda,” kusho uMavundla.
UMdidiyeli we-ANC KwaZuluNatal uMnuz Mike Mabuyakhulu unxuse amalungu enhlangano ukuba ehlise imimoya ngemuva kokubulawa kukaMchunu.
UMabuyakhulu uchaze uMaqatha njenge qabane elife likholelwa kwi-ANC.
Ikhansela le-ANC eMkhandlwini waseMsunduzi uMnuz Mtuza Mkhize lithe bayazi ukuthi izimbangi zabo zihlela ukubulala amanye amaqabane njengoba kunohlu lwabantu ezifuna ukubasoconga.
“Bambulele uMaqatha mhlawumbe yimina ozolandela kodwa esikushoyo ukuthi sesikhathele ukubulawa manje ngoba siyabazi abasibulalayo,” kusho uMkhize.
Ubuholi be-ANC esifundeni iMoses Mabhida eholwa nguMnuz Mthandeni Dlungwane onguSihlalo noMnuz Mzi Zuma, uNobhala bebengekho kulo mngcwabo kanjalo nobuholi bukamasipala obuholwa nguMnuz Themba Njilo, iMeya.
Khonamanjalo ufihliwe izolo umholi we-IFP oLundi uMnuz Sibuyiselo Dlamini obekwe kubo eDlebe emngcwabeni obuhanjelwe ngumholi we-IFP inkosi Mangosuthu Buthelezi. UDlamini udutshulwe ngeledlule.
IKHANSELA le-ANC uNkk Sibongile Mkhize, ilungu lesigungu esiphezulu kwi-ANC uMnuz Jackson Mthembu noSihlalo weMKMVA uMnuz Themba Mthembe besenkonzweni yesikhumbuzo yesishoshovu senhlangano esibulewe uMnuz Mswawenkosi ‘Maqatha awaziqobi’ Mchunu...